Yale Smart Keypad - Keyboardkeyga Guriga - SmartMe
Waxyaabo kala duwan ayaan ku arkay gurigayga. Waxaan automated laydhadhkayga, indhoolayaasha, kululaynta iyo muddo dheer ayaan sidoo kale doonayay in aan otomatiga qufulka. Waxaan haystay dhowr ka mid ah, ugu dambayntiina waxay si joogto ah ugu degtay albaabkayga Qufulka xargaha 'Linus Smart Lock'. Markuu Yale ii sheegay inay ii soo dirayaan kumbuyuutar, waxaan u maleeyay inay caadi tahay, laakiin ma garanayo sababta aan ugu baahanahay. Iyo hada? Waxaan isticmaalaa Taleefankayga Yale Smart maalin kasta iyo qufulka labaad ee albaabku waa inuu ka yimaadaa Linus sidoo kale!
Waxaad u badan tahay inaad isweydiiso sababta uu qof ugu baahan yahay rada albaabka albaabkiisa haddii uu yahay guri gaar loo leeyahay. Haddii aan ka hadleyno guri marti ah oo kiro ah, way iska cadahay, laakiin gurigeena? Oo weli waxay ku taal xayndaabka? Dib-u-eegidgan, waxaan ku tusi doonaa inay weli tahay xalka caqliga badan. Waxa kaliya ee layaabka leh ayaa ah dhaqanka deriska, laakiin tayda ayaa durba dhaaftay marxaladii yaabka surprise
Yapad Smart Keypad waa… Keypad albaabka
Aynu ku bilowno qaabka kumbuyuutarka ee Yale. Cabirkiisu aad ayuu muhiim u yahay. Kiiboodhka runtii wuu yaryahay (75 mm x 25 mm), laakiin xoogaa qaro weyn (23 mm). Markii ugu horeysay ee aan arko iyada, waxaan ka baqay inay albaabka ka istaagto.
Waxay noqotay, si kastaba ha noqotee, inay si fiican ugu habboon tahay albaabka albaabka waxayna u egtahay sidii loogu talagalay inay weligeed halkaas joogto. Ilaa aan ka yaabay sida wanaagsan ee ay ula eg tahay albaabkayga hadda iyo sida ay isugu habboon yihiin.
Kiiboodhku waa mid aad u yar, waa uun toban fure oo lagu daray Yale key kaas oo midkood xaqiijinaya isku darka ama albaabka ka xidhaya. Batoonadu waxay iftiiminayaan casaan markaan bilawno soo galida lambarka. Daacadii, waxaan u xiisay xoogaa iftiinka hore ee badhanka hore (tusaale ahaan adoo adeegsanaya dareeraha dhawaanshaha) iyo codka xaqiijinta ee aan riixnay badhanka. Sida aan u isticmaalno kiiboodhka maalin kasta wuu la qabsan doonaa, laakiin dadka adeegsada markii ugu horreysay ma noqon karto wax dareen leh.
Ayaa kale oo u baahan kumbuyuutar?
Ka soo horjeedka muuqaalka, tani waa su'aal runtii muhiim ah. Muxuu yahay kiiboodh noocan oo kale ah? Haddii aan leenahay quful smart oo kaligiis furaya oo xiraya, runti ma waxaan u baahanahay kumbuyuutarkan? Haddii aan diyaarin lahaa qoraal ku saleysan kaliya waxyaabaha laga helo internetka, waxaan kuu sheegayaa inay u tahay wax dheeraad ah suurtagalnimada dadka doonaya inay kireystaan ​​guri. Laakiin taasi run maahan. Waxaan u adeegsadaa kumbuyuutar markasta laba qof oo kaliya oo halkaas ku nool.
Markaa aan ku bilaabo kiisaska adeegsiga ee aan yareyn ee sida dhabta ah u macquul ah. Ugu horreyntii, inta badan waxaan uga tagaa gurigayga safar gaaban. Sanduuqa dhexdiisa, garaashka ama keega. Uma baxo banaanka degmadayda oo mararka qaar taleefankayga ayaan guriga ugu tagaa. Markii aan ka tago daqiiqad ka dib, albaabka ayaa si toos ah u xirmaya.
Haddii aanan taleefan haysan, waan kubixi lahaa albaabka, ama waan garaaci lahaa si ay xaaskeygu albaabka iigu furto. Waad ku mahadsan tahay badhanka iyo koodhkayga shakhsiga ah, albaabka ayaan si dhakhso leh u furi karaa. Oo si dhammaystiran buu u dhammaystirayaa. Haddii aan ka soo laabto safar dheer oo aan aado albaabka, si toos ah ayuu uga furmayaa iyada oo loo marayo Bluetooth. Oo markaan u boodo sanduuqa boostada oo aan soo noqdo, waa markaan galayo lambarka.
Tusaale kale waa One Touch, yacni albaabka oo lagu xiro badhanka Yale. Kaliya waxaan riixayaa badhanka iyo qufulka qufulka. Kaliya waxaan ubaahanahay inaan ogaado sida loogu xiro One Touch goobta HomeKit. Nasiib darrose, Yale weli kumuu darin taageerada toobiyeyaasha, sidaa darteed sidaas uma fududa. Si kastaba ha noqotee, way shaqaysaa.
Yale Smart Keypad ee kirada iyo qoyska
Haatan aan u gudubno kiisaska isticmaalka caadiga ah ee loo abuuray qufulkan. Kiiboodhka Yale Smart wuxuu ku xiraa qufulkeenna iyadoo la adeegsanayo Yale Access App. Halkan waa halka aan ku lammaaneyno waana ku xakameyn karnaa. Ku darida arjiga waxay noo ogolaaneysaa hawlo badan.
Marka hore, waxaan abuuri karnaa lambarro marti ah. Sidan oo kale, waxaan u oggolaan karnaa qof inuu gurigayaga hal mar galo, ama aan soo saarno lambar shaqeynaya maalmo cayiman. Yale xitaa wuxuu leeyahay isdhexgalka AirBnb, marka hadaad kireysato aqalkaaga sidan, runtii waa mudan tahay inaad tixgeliso.
Faa'iidada ayaa sidoo kale u abuureysa lambar milkiile guri kasta. Sidan oo kale, waxaan ku leeyahay tayda, taas oo ii fududahay inaan xasuusto, Magda-na ay iyadu leedahay. Mahadnaqa ikhtiyaarka ogeysiiska ah, waan ogahay goorta ay guriga soo gasho, iyaduna way ogtahay markaan soo galo.
Way shaqaysaa uun
Kiiboodhkan yari wuxuu ii noqday xal u baahan aniga oo dariiqa labaad ee albaabka sidoo kale uu ahaado Yale. Yale Smart Keypad waa horumarka ugu fiican ee Yale smart qufulka! Cabsida oo dhan ee ah inaan hilmaami doonno taleefankeena ka dib markaan guriga ka baxno way baaba'aan markii keypad yar lagu rakibo albaabka. Xaqiiqduna inay sifiican uguxirantahay albaabkeyga waxay xaqiijineysaa aaminsanaantayda inaan ugu dambeyntii helay xalka saxda ah.
Yale Gudaha Wi-Fi Camera Pan & Janjeeri - tijaabada kamaradda gudaha
kamarad, dib u eegis, yale
Waxaan xasuustaa inaan usbuuc fasax ah ku maqnaa gurigeyga oo aan ku maqnaa fasax. Waxaan doonayay inaan uga tago "waardiyaha" guriga xoogaa nabadeed oo dheeraad ah. Waqtigaas ka dib, xalka ugu dhaqsaha badan wuxuu ahaa in la isticmaalo barnaamijka Alfred. Waxaan boodhka ka jaray kii hore, oo jilicsan ...
Smart Home Abriil 2021 - Yale Linus, 70mai iyo Philips Hue
70amai, Phillips hue, trailer, unboxing, yale, yale linus
Yale wuxuu ku dhawaaqay iskaashi cusub oo lala yeelanayo DoorBird
Ka dib markii dhowaan la soo saaray shey cusub sida Linus® Smart Lock, Yale wuxuu soo saarayaa noocyo kala duwan oo isdhexgal ah oo lala yeelanayo magacyada lamaanaha. Midka ugu cusub ayaa la jaan qaadaya barnaamijka 'IP DoorBird video intercom'. Hada macaamiisha waxay awoodi doonaan inay meel fog ka furaan ...
Kaamirooyinka cusub ee Yale
Yale, oo ah soo saare kamarad caan ah, ayaa nagu wargelisay alaabteeda cusub. Kaamirooyinka cusubi waa inay ahaadaan gudaha iyo dibaddaba. Faahfaahin dheeraad ah hoos! Hal dalab, fursado badan Kamarada ugu horeysa waxaa loo isticmaalaa in lagu kormeero gudaha dhismaha ...
SOHO Smart Lock - quful la yaab leh oo kiro ah
xakamayn caqli, quful smart, SOHO, SOHO Smart Lock, tedee, WeLock
Markii aan arkay SOHO Smart Lock markii iigu horreysay, ma aanan yeelan aragti wanaagsan. Qufulka uu kumbuyuutarka ku xiran yahay dhinaca kale ima qancin. In kasta oo aanan wali ku rakibi doonin guriga, haddana waa ...
Tedee qufulka caqliga leh ee shahaado AV-TEST la aqoonsan yahay oo ah Badeecada Guryaha Smart Smart
gerdview, xakamayn caqli, quful smart, tedee
Qufulka Polish-ka ee nooca tedee ee ay ku shaqeyso Gerda ayaa helay shahaado "La ansaxiyay Smart Home Product" shahaadada, oo ay bixisay AV-TEST. Ururkan madaxbannaan iyo shaybaarku wuxuu maalin walba la macaamilaa barnaamijyada lagu baaro softiweerka iyo qalabka IoT. Qalcadda Tedee ayaa ...
Smart HomeKit sanduuqa baakadka ah ee la heli karo si loo sii qabsado
quful smart, yale
Wax dhibaato ah miyaad ka qabtaa bixinta xirmooyinka waraaqaha? Ma jirto cid iyaga ka soo qaadda? Hadda xal aad u xiiso badan oo ka yimid Yale ayaa soo muuqday. Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay taageero loogu talagalay HomeKit. Yale wuxuu ku soo bandhigay CES 2020 laba shey oo cusub, hadda ...
Qufulkii ugu horreeyay ee "aan la arki karin" ee tooska ah ee tooska uga ah Heerka Heerka Heerka
quful smart, heerka qufulka, xakamayn caqli
Qufulka smartka ayaa si muuqata ugu soo kordhaya miyirkeena. Weli wax badan oo guryaheenna ka mid ah kama jiraan, laakiin waxaan durba suuqa ka heli karnaa tiro aad u tiro badan oo alaabooyin ah. Hadana hadaadan dibada ka arki karin ...